Ajax oo niyad jab ku riday kooxaha Barcelona iyo Tottenham , sababa la xiriira de Jong – Gool FM
Ajax oo niyad jab ku riday kooxaha Barcelona iyo Tottenham , sababa la xiriira de Jong
(Ajax) 09 Sept 2018. Ajax ayaa sii wadi doonta dagaalka ay ku dooneyso inay ilaashato xidigeeda khadka dhexe ee da’ada yar Frenkie de Jong, kaasoo ay xiiseenayaan kooxaha Barcelona iyo Tottenham Hotspur.
Kooxda Barcelona ayaa waxay Frenkie de Jong ka gudbisay dalab gaarsiisan € 25 ilaa iyo 30 million, xili sidoo kale agaasimaha ciyaaraaha ee kooxda reer Spain ee Eric Abidal uu markale sameeyay isku day ku aadan laacibka kooxda Ajax.
Laakiin kooxda Ajax ayaa waxay wali go’aansaneysaa inaysan iska iibinin xidigeedan khadka dhexe ee Frenkie de Jong.
Sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur ayaa lagu soo celiyay dalab gaarsiisan 50 million euro, maadaama ay maamulka kooxda reer Holand aysan dooneynin in ay lacago ku doortaan adeega laacibkoodan.
Si kastaba kooxda Ajax ayaa waxay dooneysaa inay markale dib ugu soo laabato sharafkii ay ku lahayd qaarada yurub, sidaas darteed waxay si cad ugu deeriyeen kooxaha Barcelona, iyo Tottenham Hotspur.
Pogba oo doortay xidiga uu doonayo inuu ka garab ciyaaro Messi iyo Ronaldo kadib ka tagistiisa Man United
Kooxda Liverpool oo dooneysa in laacibkeeda Joe Gomez ay ku abaal mariso heshiis cusub